Kutheni iSicwangciso-qhinga sakho seNtengiso esiPhumayo sisilela | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 11, 2013 NgoMvulo, Matshi 11, 2013 Douglas Karr
Kukho isilingo ngabo bethu kwishishini lokuthengisa elingenayo ekuphunguleni ukuthengisa okuphumayo. Ndide ndafunda apho abanye abathengisi abangenayo bathe akukho mfuneko yakhona yentengiso ephumayo. Ngeliphandle, yile bunk. Ingcebiso eyoyikekayo kulo naliphi na ishishini elijonge ukwanda kwiimarike ezintsha kwaye linxibelelane namathemba abawaziyo aya kwenza abathengi abakhulu.
Ukuba unophawu oludumileyo (njengoko iibhlog ezininzi kunye neearhente zemidiya yoluntu zisenza), kusenokungabikho mfuneko yokuba uthathe ifowuni kwaye wenze iifowuni ezibandayo. Ilizwi lomlomo kunye nokuhanjiswa kunokwanela ukukunceda ukhulise ishishini lakho. Ayisiyonto intle ukuba iinkampani ezininzi zinayo, nangona kunjalo. Ukuze zombini zikhule kwaye zoyise umtsalane, uninzi lweenkampani kufuneka zibandakanye isicwangciso esiphumayo sokuthengisa. Nokuba kunjalo, baninzi ekuthiwa ziingcali zentengiso abacebisa ngenani elithile labanxibelelana abanethemba ngaphambi kokubashiya.
Uninzi lweendlela zokuthengisa eziphumayo ziyasilela kuba azingqinelani ekubizeni abathengi abangaphakathi kwiifemographic zabo eziphambili. Sixoxe ngoku malunga no-Bill Johnson - umseki-kunye we-Jesubi, a Isixhobo sokuthengisa esizenzekelayo kunye nomxhasi weMartech.
Inxalenye yesizathu sokuba uBill abe likholwa elikhulu ekuzingiseni ngobuchule kwaye kutheni bakha iJesubi ibuyela kwiintsuku zabo zokuqala e I-Aprimo. Isigqibo senziwe ukubiza abathengisi ukuya kumaxesha angama-12 Ngaphezulu kwe-10 ukuya kwi-12 leveki ukuzama ukubafumana emnxebeni ukuze baqhube incoko. Kuba u-Aprimo wayejolise kumaqela entengiso angama-Fortune 500 babenabantu abaninzi ekujoliswe kubo.
Kwakunzima kakhulu, kunzima ukufumana ithemba lokuthatha umnxeba okanye ukubuyisela ivoicemail. Merrill Lynch kuluhlu lwabo ekujoliswe kubo Amagama angama-21 okuthengisa Ukujolisa… ukusuka kwi-CMO, ukuya kwi-VP yeNtengiso ukuya kuMlawuli weNtengiso ye-Intanethi, njlnjl UMlawuli weNtengiso yaBathengi yaBucala Ekugqibeleni uphendule umnxeba wakhe kwilinge le-9. Wayengumntu we-18 ekujoliswe kuye. Wamkela isipho sokuba nentlanganiso, yajika yaba lithemba eliqinileyo, kwaye waqhuba ikhontrakthi yezigidi zeedola. Ukuba baye bayeka ukubiza emva kwemizamo emi-6 okanye ukubiza abantu abayi-4 ngekhe sibe nencoko naye.
Kutshanje uJesubi uvale isivumelwano Xerox. Ummeli oyilwayo obizwa ngokuba yi-VP yokuthengisa amatyeli ali-10 kwisithuba seveki ezisixhenxe. Ngokwenene waxhoma kuye kwilinge le-7 :). Uqhubeke nokufowuna kwaye kwilinge lakhe le-2 wathi andingomntu ulungileyo nceda ufowunele i-SVP yeNtengiso. Umphenduli wam wambiza kwaye kwinzame ze-10 wathatha ifowuni yakhe wathi, "Ndingumntu onzima ukufumana indlela oyenze ngayo?" Ummeli kaBill uchaze inkqubo yakhe kunye nendlela ancede ngayo uJesubi UXerox ucele idemo kuloo ndawo kwaye kwiiveki ezimbalwa kamva iJesubi yafumana isivumelwano somsebenzisi sama-8.
Akukho namnye kule mizekelo ingasentla ebengavala ngothengiso olungenayo kuba amathemba ebengakhangeli sisisombululo. Akukho namnye obeya kuphendula kwi-voicemail. Akukho namnye ngewayenze ishishini kunye neenkampani ezichaphazelekayo ukuba ii-reps zibizwe amaxesha ama-6 kuphela okanye kubo bonke abafowunelwa aba-4. Amandla kukwazi ukuba kuthatha ukuzingisa nokwazi ukuba kufanele ukuba yintoni oko kuzingisa.
Jesubi yandisa imveliso yokuthengisa kunye neengxelo ezinengqiqo kunye nokulandelelwa kwengxoxo okusebenzayo. Yonga ixesha kwaye uthengise ngakumbi ngokunqakraza umnxeba kwizikrini, ukulandelela okuzenzekelayo, kunye nezixhobo zokunika ingxelo ezinamandla.
tags: kubizaCRMjubimerrill lynchukuthengisa okungaphandleoomatshini bokuthengisaintengiso yecrmukujongwa kwentengisointengiso yokujonga izinto ezizenzekelayoxerox
Mar 12, 2013 ngo-9: 54 AM
Enkosi njengesiqhelo uDoug, okokuqala izandi njengesisombululo sokuthengisa esizenzekelayo kufanelekile ukufumanisa ngakumbi, kwaye okwesibini iposti yakho ibangele incoko elungileyo malunga nokuqala kunye noluntu lwethu.
Mar 12, 2013 ngo-10: 22 AM
Kukho inqaku lokunciphisa ukubuya. Ngabathengi be-B2B esisebenza nabo sifumanise ukuba emva kweenzame ezi-8 zokutsalela umnxeba kunye ne-voicemail ukufikelela, ukubuya okanye inqanaba lokuzibandakanya lihle kakhulu. Ukuzingisa kulungile kwaye kulungile de ube yintlungu ekhathazayo e-esileni, ekhathaza umbono wenkampani kunye nophawu. Ewe kukho okwahlukileyo apho abathengisi "abaqeqeshi" baya kuthi beze eqongeni kwaye bathethe malunga nentengiso yangaphakathi eyenze iinzame ezingama-87 kwaye yaphuhlisa intengiso yobomi bayo. Yiyo eyahlukileyo. Ukuba umntu unditsalela umnxeba izihlandlo ezili-12 xa ndingaphendulanga, sendikulungele ukumilisela imijukujelwa yenyukliya kwishishini labo. Kubalulekile ukuba wazi ukuba uza kubeka nini ixesha kwaye ubeke abafowunelwa kwinkqubo yokondla.
Mar 30, 2013 ngo 5:22 PM
Okokuqala, ndiyakuthanda ukuthetha nomnxeba. Ngoba? Kuba ndiyenza kunqabile, kwaye kuyilo olo. Ukuba ndithetha nomntu, ndihlala ndithenga okanye ndithengisa into. Ndifumana iifowuni ezingamashumi amabini ngenyanga endifuna ukuzithatha- enye i-2 ukuya kumakhulu amathathu (ndikhangele inkqubo yethu ye-VOIP ngoku) zii-BS endizicekisayo. Kuvakala ngathi ukuthengisa ngethemba lokuzenzekelayo kunethemba lokunyusa elo nani. Masithethe ngokungagungqi-ayizukubonisa kakuhle i-chap kwelinye icala lomgca. Ngoba? Kuba andikholelwa ukuba kukho umntu oza kunditsalela umnxeba ngesisombululo endingekasijonganga- kwaye ukuba ibinexabiso esele ndifikile kubo. Le ndlela ivaliweyo, ethembakeleyo yokuzithemba yiyo eyenza ezinye zeempawu zomthengi wam persona- ndingumamkeli wamandulo othenga ngexabiso kwaye ukhetha amajelo edijithali- kwanoluntu- ukwenza uphando nokwakha isisombululo esiqhuba ishishini lam. .
Ke, inqaku apha kukuba nokuba ndibizwa kangaphi ngayo nayiphi na inkqubo, ayisiyijelo lam endilithandayo- kwaye inyani ayizukusebenza, abantu bazamile. Oko akuthethi ukuba awusebenzeli abanye, ukuba inyani le mizekelo ingentla ibonisa ukuba iya kuba- nangona ndicinga ukuba ikwabonisa ukuba umthengi uyaqhubeka nokuziqhelanisa nolona luhlu lokwenyani lokuzilolonga ngefeleni apho bonke abathengisi banokuzuza khona. Ukubethwa sisibetho akusebenzi kubo bonke abantu-kwaye akunakumiselwa sisihloko somsebenzi, ubungakanani benkampani okanye nendima yokuthenga- kuxhomekeke kubuntu. Nokuba isisombululo kukuthengisa oomatshini abazenzekelayo, okanye ukuthengisa okuzenzekelayo okuthengisa akukho nto ingena endaweni yokwazi ukuba uthetha nabani. Kwaye wakuba uzifumene emnxebeni, incoko iya kuba sisityebi kuyo.
UJustin Grey, CEO